एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य ३ हजार !
रसुवाको लाङटाङ राष्टिय निकुञ्जको दाउराको खपत कम गर्नका लागि पर्यटकी क्षेत्र लाङटाङको स्याफ्रुबेसीबाट सिलिन्डर ग्यास खच्चरद्वारा ढुवानी गरिँदै । यहाँ प्रति सिलिन्डर ग्यास खच्चरबाट ढुवानी गर्दा रु. तीन हजारभन्दा बढी पर्ने व्यापारी बताउँछन् । तस्बिरः ज्ञानेन्द्र न्यौपाने, रसुवा, रासस